खो लामा पानीको साटो र ग त ब,ग्न था,ल्यो ! ५ सेकेन्डमा भिडियो हेरेर सेयर गरौ नत्र अनिष्ट हुनेछ – Taja Khawar
खो लामा पानीको साटो र ग त ब,ग्न था,ल्यो ! ५ सेकेन्डमा भिडियो हेरेर सेयर गरौ नत्र अनिष्ट हुनेछ
प्रकाशित मिति: आइतबार, जेठ १६, २०७८ समय: १८:५४:३७
भगवान प्रत्यक्ष देखिएपछि खोलामा पानीको साटो रगत बग्न थाल्यो ! ५ सेकेन्डमा भिडियो हेरेर सेयर गरौ नत्र अनिष्ट हुनेछ
भिडियो अन्त्यमा छ ।। अवश्य हेरेर सेयर गर्नुहोस नत्र तपाईको जिवनमा ठूलो अनिष्ट हुनसक्छ ।
म भन्दा १४ बर्ष कान्छी त्यो केटीले म मा ठुलै प्रभाव जमाएकी छ । उ भित्रको बिचार, कुरा गर्ने शैली र मलाई बुझ्ने क्षमताले गर्दा म आजकल उसकै उमेर छेउछाउको पागल प्रेमी बनेको छु । उसको र मेरो सबै भन्दा मिल्ने स्वभाव किताव पढ्नु हो । उसलाई साहित्यमा साह्रै रुचि हुनु र म अंग्रेजी साहित्यको प्रोफेसर हुनुले पनि हामीलाई बाँधेको छ, जस्तो लाग्छ । फेरी श्रीमतीले ध्यान भङ्ग गरिदीई, एकछिन बाबु संग बसिदिनुस् न, म पसल जानु छ । हजारको नोट दिदैं भनें, जाउ म हेर्छु । पर्दैन पैसा म संग नै छ, उ ढोकाबाट निस्केको हेरिरहें ।मेरी श्रीमती साह्रै सोझी छ, कुनै कुराको गुनासो र माग गर्दिन । सबैले उसको रुप र गुणको तारिफै गरेको सुन्छु । आमा गर्विलो हुँदै भन्नुहुन्छ, मैले हेरेर ल्याएकी बुहारी पो हो त, यति माया त छोरीले पनि गर्दैनन् । एकदमै कम बोल्ने स्वभावकी छ उ । मास्टर्स गरेकी मेरी श्रीमतीको अहिले सम्म फेसबुक छैन । सिउँदो भरि सिन्दुर लगाउँछे उ, आज सम्म देखेको छैन उसले अध्यारो अनुहार लगाएको । ठुला ठुला आँखा, मिलेको दाँत, बाधेपनि बाटेपनि उत्तीकै सुहाउने उसको लामो कपाल ।
Last Updated on: May 31st, 2021 at 12:07 am